> Resource > Apps > Sidee si ay u gudbiyaan Apps ka Samsung Galaxy S2 in S4
Dhawaan la casriyeeyay ka Samsung Galaxy S2 in S4, oo hadda ku feegaaro madaxa aad si ay u gudbiyaan barnaamijyadooda u dhaxeeya. In kasta oo Chine ayaa la badbaadiyey on card SD ah, ma waxaad si toos ah iyaga nuqul karaa S2 iyo paste in S4, sida aad ku wareejin music, videos iyo sawiro. Dajinta barnaamijyadooda isla S4 sidoo kale ma aha fikrad fiican, ka dib oo dhan, waxa aad qaadan doonta waqti dheer, gaar ahaan marka aad leedahay badan oo Chine in ay la soo bixi. Markaas, waa ay jiraan hab si aad u fudud u barnaamijyadooda ka Samsung Galaxy S2 wareejiyo S4?
Jawaabta xaqiiqdii waa Haa. Effortlessly Waxaad ku samayn kartaa marka aad haysato qalab xirfad kala iibsiga phone magacaabay Wondershare MobileTrans (Windows) ama Wondershare MobileTrans u Mac . Waxay ka caawisaa si ay u gudbiyaan oo dhan barnaamijyadooda ku saabsan Samsung Galaxy S4 S2 in la click ah. S2 iyo S4 sokow, qalab kala iibsiga telefoonka ayaa sidoo kale si fiican u la shaqeysaa S3, Fiiro gaar ah iyo in ka badan 3/2 Samsung qalabka, LG, Sony, Motorola iyo wixii la mid ah.
3 tallaabo in ay barnaamijyadooda ka Samsung S2 wareejiyo S4
Download qalab kala iibsiga telefoonka kula badhamada kor ku xusan oo raac tilmaan-hoose. Halkan, waxaan qaadi version Windows sida tusaale.
Tallaabada 1. Ku rakib oo ay maamulaan qalab kala iibsiga phone kombiyuutarka
Orod qalab kala iibsiga telefoonka ku computer Windows iyo suuqa kala muhiimsan ee cad oo user-dareen muuqan doonaa. By gujinaya Start , waxaad ka heli suuqa kala iibsiga telefoonka.
Tallaabada 2. Connect Samsung Galaxy S4 S2 iyo in kombiyuutarka
Connect laba Samsung telefoonada in kombiyuutarka deeruhu in fiilooyinka USB. Marka ay ku xiran tahay guul leh, qalab kala iibsiga telefoonka nuqulkiisa doonaa, iyaga oo muujinaya in ay suuqa kala weyn.
Your Samsung Galaxy S2 lagu muujiyay ee guddiga bidix, iyo S4 on xaq. Flip u dhaxeeya waxaa loo isticmaalaa in la beddelo meelahooda.
Tallaabada 3. Transfer barnaamijyadooda ka S2 in S4
Sida shaashada Isbedelka, aad awoodaan si ay u gudbiyaan xiriirada, jadwalka taariikhda, fariimaha qoraalka ah, music, videos, sawiro, abuse wac sidoo kale barnaamijyadooda. By default, oo kulligoodna waxaa lagu hubiyaa. Taasi micnaheedu waa in, ay tahay in aad ka saarto marks ka hor files kale marka aad rabto inaad u guurto barnaamijyadooda ka S2 in S4.
Markaas, riix Start Copy inuu ku soo bilowdo kala iibsiga app. Waxa aad qaadan doontaa waqti yar. Dhab ahaantii, waxa ay gebi ahaanba ku xiran tahay mugga barnaamijyadooda ku saabsan S2. Marka iibsiga app ah uu dhamaado, waxaad riixi kartaa OK si loo dhammayn.
Hadda, waxa aad ka arki sida loo nuqul ka Chine in S4 ka S2. Waa wax cajiib ah sahlan, soo maaha? Dhab ahaantii, ka sokow app kala iibsiga u dhaxeeya S2, S4 iyo qalabka Android dheeraad ah, waxa kale oo aad awood u dhaqaaqo xogta ka qalab Nokia Symbian in qalab Android , dayanayaan in qalab macruufka xogta Android , xogta bedesheen ka qalab Nokia Symbian in qalab macruufka ah , iyo in ka badan.